ဧရာဝတီ Irra Wadi | Toward Peaceful Global Society
Posted on March 4, 2014	by irrawadi
တမန်တော်မုဟမ္မဒ် (PBUH) ဖွားမြင်သည့်နေရာအား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း မလွတ်သည့်အတွက် ဖြိုချဖယ်ရှားရန် ဆော်ဒီ အာဏာပိုင်များ စီစဉ်နေ
၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ကတည်းက ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ၏ ကာဗာ ၀တ်ပြုကျောင်းတော် မတ်စဂျဒ် ဟာရမ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချဲထွင်ရေးအစီအစဉ် တစိတ်တပိုင်း အဖြစ် တမန်တော်မြတ်ဖွားမြင်သည့် နေရာဟု ယူစရသည့် နေရာအား ဖြိုချရန် ဆော်ဒီအာဏာပိုင်များက အစီအစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
ဆော်ဒီအာရေဗီးယားနိုင်ငံတွင် သမိုင်းဝင်နေရာများ များစွာရှိသည့်အနက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများကြောင့် သမိုင်းဝင်နေရာများမှာ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရပြီး၊ ယခု တမန်တော်မြတ် ဖွားမြင်တဲ့နေရာမှာ နောက်ဆုံး ကျန်ရှိနေ တဲ့ သမိုင်းဝင်နေရာတခုဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာရှိတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် စွန်နီ၊ ရှီအာဟ်တွေ ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေကြောင်း၊ အခုလိုဖျက်ဆီးဖယ်ချတော့မှာကို လူတော်တော် များများ သိရှိခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်း ဗြိတိန်အခြေစိုက် အစ္စလာမ်ယဉ်ကျေးမှု သုတေသနဖောင်ဒေ ရှင်းမှ ဒေါက်တာအိရ်ဖာန်းအလ်အလာဝီက ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်ကလည်း အဆိုပါ တမန်တော်ဖွားမြင်ရာနေရာတွင် မီးရထားဘူတာရုံ ဆောက်လုပ်မည့် အစီအစဉ်အား ဆော်ဒီဘုရင်မိသားစုက ပယ်ချခဲ့တာပါ၊ သို့သော ယခုဆောင် ရွက်နေသော ချဲ့ထွင်ရေး အစီအ စဉ်အရ ခေတ်မီအဆောက်အဦးများ၊ အီမာမ်ရှေ့ဆောင်နေအိမ်နှင့် အဆင့်မြင့်ဧည့်သည် များနားနေရာ တို့ ပါဝင်မည်ဟု ဆောက်လုပ်ရေး ကုမဏီက အတည်ပြုပြောကြားသည်။
ဟာရမ် နယ်နမိတ်ထဲ မှာရှိသည့် ၎င်းပြင်ဆင်ချဲ့ထွင်းရေးနေရာတွင် (၁၉၅၀) ခုနှစ် က ဆောက်လုပ်ထား သည့် စာကြည့်တိုက် တစ်ခုလည်း တည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး ၎င်းစာကြည့်တိုက်ကိုလည်း ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်တဲ့ အတွက် မတ်စဂျဒ်ဟာရမ်တွင် ၀တ်ပြုသူ အရေအတွက် ပိုမိုများပြားစွာ ၀င်ဆံ့နိုင် မှာဖြစ်ပေမယ့်လည်း တဖက်မှာတော့ အစ္စလာမ့် သမိုင်း ၀င်နေရာ အများအပြားမှာတော့ ဖယ်ချနေရပါတယ်။
လက်ရှိအကျယ်အ၀န်းမှာ စတုရန်းမီတာ ၃၆၅၀၀၀မှ ၄၀၀၀၀၀ ချဲ့ထွင်ပြီးဖြစ်တာကြောင့် ၀တ်ပြုသူ ၁.၂ သန်းအထိ ၀င်ဆံ့နိုင်ရန် ဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်သစ်ကြီးကို ဆော်ဒီဘုရင်မင်းမြတ်မှ ခွင့်ပြု ပေး ထားဖြစ်ပါတယ်။
မက္ကာမြို့ဒေသခံပြည်သူများကပင် မိမိတို့မက္ကာမြို့အား လာစ်ဗီးဂစ်မြို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်လာကြတာကို တွေ့ရပြီး၊ လုပ်ငန်းခွင်ကြောင့် ဖြိုချခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ အဆောက်အဦးပေါင်း (၁၈၀၀)ကျော် ခေတ်မှီဟော်တယ်ပေါင်း (၄၀၀)ကျော်နှင့် အပန်းဖြေစခန်း (၁)ခုထဲတွင် အခုလိုသမိုင်းဝင်နေရာပေါင်း (၄၀၀)ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ အဲ့ဒီ့ အထဲ တွင် အော်သိုမန် နှင့် အဗာဆီ လက်ထက် အဆောက် အဦးများပါဝင်နေပြီး၊ တမန်တော်မြတ်၏ ဦးရီးတော်ဖြစ်သူ ဟမ်ဇာသခင်၏ နေအိမ်နေရာများလည်း ပါဝင်တယ်လို့ အာရဗ်သတင်းများ ၏ ဖော်ပြ ချက်အရ သိရပါတယ်။
လွန်ခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်များအတွင်းရှိခဲ့သည့် အစ္စလာမ်ဘာသာ၏ အထွဋ်အမြတ် နယ်မြေ၏ မြင်ကွင်း မှာတော့ မြန်ဆန်စွာပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတ၀ှမ်းက မွတ်စ်လင်မ်များ၏ သဘောထားအမြင်များ ကိုပါ ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
” ဒီသတင်းကိုတော့ အလင်းမျက်ဝန်းဝိုင်းတော်သားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့
ရှာကေရာ မှ ပေးပို့ တင်ဆက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် “
Posted in အစ္စလာမ်ဘာသာ	| Leaveacomment
By JANE PERLEZMARCH 1, 2014
View slide show|12 Photos
Bigotry Against Muslims Fuels Massacre in Myanmar
အခု နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေမှာ ဒီလို ခေါင်းစဉ် တွေနဲ့ တတ်လာတယ်ဗျ။ “ရိုဟင်ဂျာ တွေကို ခွဲခြား ဖိနှိပ် ဆက်ဆံ တာက မြန်မာ အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီ”တဲ့။ Fortify Rights က ရေးတာပေါ့ဗျာ။
သိတဲ့အတိုင်းပဲ ရိုဟင်ဂျာတွေက ခရီးသွားလာခွင့်၊ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခွင့်၊ ကလေး မီးဖွားခွင့်၊ အိမ်ပြင်တာ၊ ၀တ်ပြု ဆုတောင်းတာက အစ အကန့် အသတ်ထား ခံနေ ရတာလေ။
Fortify Rights ရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို ရဲထွဋ်က ဘယ်လို ပြန်ပြော သလဲ ဆိုတော့ အဲဒီ အဖွဲ့ဟာ ဘင်္ဂလီတွေ အတွက် သက်သက် လော်ဘီ လုပ်ပေး နေတဲ့ အဖွဲ့ ပါတဲ့။ ဒါကြောင့် သူတို ရဲ့ အစီရင်ခံစာကို လုံးဝ လက်မခံ ပါဘူးတဲ့။
ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဝင်မြိုင်ရဲ့The Wall Street Journal ကို ပြောကြား ထားတာလေး တစ်ချက် ပြန်ကြည့် ကြရအောင်။ “အိမ်ထောင် ပြုတာနဲ့ မွေးဖွားနှုန်း ကန့်သတ် တာတွေ အပါအ၀င် လူဦးရေ ထိန်းချုပ်တာ တွေကို နစက လက်ထက်က ပြုလုပ် ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်တဲ့။
ဒါပေမယ့် Fortify Rights ကလည်း
– ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်တဲ့ မြန်မာ အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီတွေက ရိုဟင်ဂျာတွေ နေလို့ မရပဲ ထွက်ပြေးရ လောက်အောင် တင်းကျပ် နေတယ်၊
– ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောက ဒေသခံတွေရဲ့ လူနေမှု စရိုက်ကို ထိပါးလာစေတဲ့ အထိ မွတ်စလင် လူဦးရေ ကြီးထွား လာခြင်း အပေါ် ဒေသံခံတွေ စိုးရိမ်မှုတွေ ထွက်ပေါ် နေတယ်လို့ ပြောကြ ပေမယ့် အဲဒီ စကားတွေက ထိပ်ပိုင်း အစိုးရ အရာရှိ တွေရဲ့ ပြောဆိုမှုတွေ ကနေ ဖြစ်ပွား နေရတာ ဖြစ်တယ်၊
– မွတ်စလင်တွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ သက်သေ အထောက် အထား မရှိပဲ အစိုးရတွေက ပြောဆို လုပ်ဆောင် နေတယ်၊
– တစ်အိမ်ထောင် ကလေး နှစ်ယောက်သာ မွေးဖွားခွင့်ရှိတဲ့ ကန့်သတ်မှုကို ထုတ်ပြန် ထားခဲ့တဲ့ အထောက် အထားတွေ ရှိတယ်လို့ ပြောဆို ခဲ့တယ်။
Fortify Rights ရဲ့ အစီရင်ခံစာကို ပြန်ကြည့် ရအောင်။
– နစကကို ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ၂၀၁၃ ဇူလိုင်က ဖျက်သိမ်း ခဲ့ပေမယ့်လည်း လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ဆက်လက် ဖြစ်ပွား နေတယ်တဲ့။
ရဲထွဋ်က ဗီအိုအေကို ဘာဆက်ပြောလဲကြည့်ရအောင်။
“ရခိုင်ပြည်နယ်ကို လာရောက် လေ့လာ လုပ်ဆောင်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ အစည်း အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း တွေက Fortify Rights အဖွဲ့ ကဖော်ပြထား သလို ပြစ်မှုမျိုးတွေ ကျူးလွန် နေတယ် ဆိုပြီး မစွပ်စွဲထားဘူး၊ ဒီအစီရင်ခံစာ မျိုးထုတ်တာ အင်မတန် ရယ်စရာ ကောင်းတဲ့ ကိစ္စပါ”တဲ့။
ဦးရဲထွဋ်က ဒီလို ကိစ္စတွေ လုံးဝ မရှိဘူး ပြောတယ်၊ ရီစရာတောင် ကောင်းသေးတယ် ဆိုပဲ။
ဦးဝင်မြိုင် ကတော့ နစက ရှိတုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတွေပါတဲ့။
Fortify Rights ရဲ့ အစီရင်ခံစာ ကတော့ အရင်ကလည်း လုပ်ခဲ့တယ်၊ အခုလည်း လုပ်နေဆဲပဲတဲ့။
ဘယ်သူ ပြောတာကို လက်ခံမလဲ၊ အသိဥာဏ် ရှိရင် စဉ်းစား နိုင်မှာပါ။
ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ ပြောကြားချက် ဖြစ်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်း အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့ အစည်း တွေက Fortify Rights အဖွဲ့ ကဖော်ပြထား သလို ပြစ်မှု မျိုးတွေ ကျူးလွန် နေတယ် ဆိုပြီး မစွပ်စွဲထားဘူး၊ ဆိုတာကို ဆက်ပြီးချက်ကျ လက်ကျ ပြောရအောင်။
ဒါကတော့ ကုလသမဂ္ဂက တစ်အိမ်ထောင် ကလေး နှစ်ယောက် မူဝါဒ ချမှတ်တုန်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစာပါ။ Website ကလည်း UN.org ပါတဲ့။
ဒါကတော့ နိုင်ငံတကာ လူ အခွင့်အရေး အဖွဲ အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ HRW ရဲ့ အစီရင်ခံစာပါ ကောက်နှုတ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ Website ကလည်း HRW.rogပါ။
The authorities in northern Arakan State havealong history of torture and mistreatment of Rohingya detainees, Human Rights Watch said.
By contrast, the Rohingya population’s access to markets, food, and work remains dangerous or blocked, and many have been in hiding for weeks.
ကဲဗျာ။ ရှင်းရှင်း ပြောရရင် ဦးရဲထွဋ်တို့ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ဆိုတာ အစိုးရက လုပ်သမျှ မိုက်ကန်း ဆိုးယုတ်မှု တွေကို မျက်နှာပြောင် တိုက်ပြီး လိမ်ဖို့ အတွက် ဖွဲ့ စည်းထားတာပဲ။ အခု ကျနော့်ရဲ့ ဒီပိုစ်မှာ ပေါ်လွင် လောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
ထပ်ပြီး ဖြည့်စွက် ပြောရမယ် ဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာ တွေကို အစိုးရက ပေါ်ပေါ် ထင်ထင်ပဲ ခွဲခြား ဖိနှိပ် ဆက်ဆံတဲ့ ပေါ်လစီ သုံးတယ်။ မြန်မာ မွတ်စလင် တွေကိုတော့ အစိုးရ ကိုယ်တိုင် ပေါ်ပေါ် ထင်ထင် မသုံးဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ပါတီတွေ၊ နိုင်ငံရေး သမားတွေ၊ ဘုန်းကြီးတွေ၊ မျက်ကန်း မျိုးချစ်တွေကို သုံးပြီးတော့ ခွဲခြား ဖိနှိပ် ဆက်ဆံတွေ ပေါ်လစီကို သုံးတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေ လောက်တော့ မဆိုးဘူး ပေါ့ဗျာ။
– See more at: http://burmese.rohingyablogger.com/2014/03/fortify-rights.html#sthash.VjVhRJHO.dpuf
Posted in အထူးဆောင်းပါး	| Leaveacomment
မှုရင်း-New York Times ဘာသာပြန်-စိုင်ဖုလ္လာဟ်(မြန်မာမွတ်စလင်မီဒီယာ)
ဇန်န၀ါရီ ၁၃ ရက်ည၊ လရောင်မှုန်ပြပြအောက်ဝယ် မိသားစုပိုင်ကွမ်းယာဆိုင်၌ ညစောင့် အိပ်နေသူ သားကြီး မူဟာမတ်(၁၅နှစ်အရွယ်)အား တရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားကြပုံကို မိခင်ဖြစ်သူ ဇော်ပသာ တစ်ယောက် သူမ၏ ၀ါးအိမ်လေးကလေးထဲမှ လှမ်းကြည့်ရုံသာ တတ်နိုင်သည်။
တစ်ညတည်းတွင် ဒူချီရာတန်ရွာ၌ တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ် စုစုပေါင်း ၄၀ ထက်မနည်း သေဆုံးပြီး ကာလကြာရှည်ဖိနှိပ်ခံရသော ရိုဟင်ဂျာတို့အတွက် အဆိုးဝါး ဆုံး အကြမ်းဖက်ခံရမှုများအနက် တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ ပြောကြားချက်အရ လုံထိန်း တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ဒေသခံ အစွန်းရောက် ရခိုင်ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ၀င်များက ရခိုင်ရဲတပ်သားတစ်ဦးအား ရိုဟင်ဂျာတို့က ပြန်ပေးဆွဲ ထားခြင်းကြောင့် ဒေါသထွက်ကာ ၎င်းတို့ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။မြန်မာအစိုးရက နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကို ရှေ့ ရှုလျက် အဆိုပါကျေးရွာ၌ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော သတ်ဖြတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တွင်တွင်ငြင်း ဆိုခဲ့ သည်။ မြန်မာလူ့အခွင့်ရေးကော်မရှင်ကလည်း အဆိုပါ သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ “အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသော သတင်း”အဖြစ်သာ ဖော်ပြသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စစ်တွေမြို့တစ်ဝိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်တွင် အိမ်များမီး ဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်ခဲ့ရပြီး ခန့်မှန်းခြေ ၃၀၀ ခန့် သေဆုံးခဲ့ရာ အများစုမှာ မွတ်စလင်များဖြစ်သည်။ ယင်းဖြစ် စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ တုန့်ပြန်ပုံက တချို့မျိုးရိုးစဉ်ဆက်နေထိုင်လာသော ရိုဟင်ဂျာ တို့ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရားမ၀င် ခိုးဝင်လာသူများဖြစ်၍ ကုလသမဂ္ဂ၏ အကူအညီနှင့် တတိယနိုင်ငံ သို့ နှင်ထုတ်ကာ ဖြေရှင်းသင့်သည်ဟူ၏။မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံ ထားကြ သည့်အတွက် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရှင် ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည် က ရိုဟင်ဂျာတို့အား ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့်ပတ် သက်၍ ပြည် တွင်း၌ ဝေဖန်လေ့မရှိ။ သူမ၏ အရေးတယူမရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လည်း ဘက်တစ်ဘက်မှ ပြောပါက တင်းမာမှု များကို ပိုမိုဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများ ကို ပြောဆိုသည်။ သူမ၏ အနောက် တိုင်း ထောက်ခံ သူများကမူ လာမည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ဆန့်ကျင်မှုကို ရှောင်ရှားလို သည့် သဘောဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်အတွင်း တခြားမွတ်စလင်အုပ်စုများကိုလည်း အလားတူ တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပေါ် ခဲ့ သော် လည်း ရိုဟင်ဂျာတို့ကို အဓိကပစ်မှတ်ထား မလိုမုန်းထားပြုမှုများက ပို၍ လောင်ကျွမ်း လွယ်စေ သည်။ ၎င်းတို့အနက် အများစုမှာ ဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်ထက်တွင် အိန္ဒိယမှ မောင်းသွင်းခံ လာရသူ များဖြစ်ပြီး မြန်မာမျိုးနွယ်အများစုက ၎င်းတို့ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ တရားမ၀င် ကျူးကျော် လာသူများအဖြစ် အထင်သေး ရှုတ်ချကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် ၁၈ မြို့နယ်အနက် ၇ မြို့နယ်တွင် မွတ်စလင်များကို သူတို့ဆေးခန်းများ၌ ကုသ ခွင့် ပိတ်ပင်ထားကြောင်း နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေး ၀န်ထမ်းများက ဆိုသည်။ မကြာသေး ခင်က ရိုဟင်ဂျာ အရေးအထူးစုံစမ်းနေသော လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည့် Fortify Rights အဖွဲ့က အာဏာပိုင် များ၏ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်အထောက်အထားများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ အစိုးရ၏ တရားဝင်အမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်များအရ ခွင့်ပြုချက်ရှိမှ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခွင့်ပေးခြင်းနှင့် ကလေးမွေးဖွားမှုကို ကန့်သတ်ခြင်းအပါအ၀င် ရိုဟင်ဂျာလူဦးရေ တိုးပွားမှုကို နှေးကွေးသွားစေရန် စနစ်တကျ ကြိုးပမ်းအားထုတ်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
သမ္မတရုံးမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စတာရဲထွဋ်ကမူ ယင်းတွေ့ရှိချက်အား “ဘင်္ဂါလီတွေဘက်က တဘက် သတ်အမြင်”အဖြစ် ပယ်ချလိုက်သည်။မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေသော ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ လွတ်မြောက် ရာအတွက် ၈၀,၀၀၀ နီးပါးရှိသော ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေး သူငယ် တို့သည် လူကုန်ကူးသူများမှတဆင့် မလေးရှား၊ ထိုင်းနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံများသို့ အန္တရာယ် များသော ပင်လယ်ရေကြောင်းခရီးဖြင့် ထွက်ပြေးကြရသည်။ တစ်ချို့ စက်လှေများ တိမ်းမှောက် ခဲ့ပြီး အများစုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ထိန်းသိမ်းခံထားရကြောင်း အာရကန်ပရောဂျက်မှ ဒါရိုက်တာ Chris Lewa က ဆိုသည်။
Posted in အထူးသတင်း, အထူးဆောင်းပါး	| Leaveacomment
တရုတ် နိုင်ငံမှာ ကလေးမှောင်ခို လုပ်တဲ့ ကွန်ရက်ကို ရဲတွေ စီးနင်း နှိမ်နင်းခဲ့မှုအရ ကလေးငယ် ၄၀၀ နီးပါးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး လူ တစ်ထောင်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ တရုတ်ရဲတွေက ပြောပါတယ်။
ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကလေးမွေးစားမှုကို ဆောင်ရွက်တဲ့ တရားမဝင် အေဂျင်စီ က လို့ ပြောဆိုပြီး အင်တာနက် ကနေတဆင့် ကလေးတွေကို ရောင်းစားကြတယ်လို့ အရာရှိတစ်ယောက် ကို ကိုးကားဖော်ပြပါတယ်။
နည်းလမ်းသစ်တွေနဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် နို့စို့ကလေးငယ်တွေ လူကုန်ကူးခံရတာကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ပို ခက် ခဲ လာတယ်လို့ တရုတ် အစိုးရ သတင်းမီဒီယာက ဖော်ပြပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ သားယောက်ျားလေးကို ပိုလိုချင်တဲ့ ဓလေ့နဲ့ ကလေးမွေးတဲ့ ဦးရေ ကန့်သတ်ချက် တို့ကြောင့် ကလေး မှောင်ခိုမှုတွေကို အားပေးသလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကလေးတွေကို ခိုးယူသူ ဒါမှမဟုတ် ကလေး မိဘတွေဆီက ဝယ်ယူသူတွေကို ပြင်းထန်တဲ့ အရေးယူ မှုတွေ လုပ်မယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ကတိပေးထားပါတယ်။
Posted in ကမ္ဘာ့သတင်း	| Leaveacomment
အုတ်ဂူ ကိုဝင်တူးပြီး ၁၇နှစ်အရွယ်ကောင်မလေး အလောင်းနဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားခဲ့သူဟာ အခေါင်းထဲ မှာ အိပ်ပျော်သွားပြီး ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ ကမ္ဘောဒီးယား ရဲတပ်ဖွဲ့က အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
Chin Chean အမည်ရှိ ၄၇နှစ်အရွယ် အမျိုးသားရဲ့ ခြေထောက်ကို အခေါင်းထဲမှာ ရွာသားတွေက စတွေ့ ခဲ့ပါ တယ်။ ဒါ့ကြောင့် သေဆုံးသူ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးရဲ့ မိသားစုကို အကြောင်းကြား ခဲ့ကြပါတယ်။ Chin Chean ဟာ ၁၇နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးရဲ့ ဈာပနကို တက်ရောက် ခဲ့ပြီး နောက် တစ်နေ့မှာ အုတ်ဂူကို ည(၁၀)နာရီလောက်ကစပြီး တူးခဲ့ကြောင်း ရဲတွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
တူးပြီးတဲ့နောက်မှာ အခေါင်းကို ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ ကမ္ဘောဒီးယား နေ့စဉ်သတင်းစာက သတင်း ထုတ်ပြန် ပါတယ်။ Chin Cheanဟာ အလောင်းနဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ အခေါင်းက အရမ်းသေးနေ တာကြောင့် အထမမြောက်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီ့နောက် အလောင်းပေါ်မှာပဲ အိပ်ပျော်သွားတယ်လို့ သူက၀န်ခံပါတယ်။
“Chin Cheanက ဆေးကြောင်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်တာတွေ လုပ်လေ့ရှိတာ လူတိုင်းသိတယ်။ ရွာဘုရားမှာ လည်း အ၀တ်မပါဘဲ ပတ်ပြေးနေဖူးတယ်။ Mr Chean ကို တရားရုံးမပို့ခင် ခရိုင်ရဲဋ္ဌာနကို ပို့ပြီးတော့ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှာပါ။” လို့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရဲတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။